TPLF oo Wadahadal ka Dalbatay Dowlada dhexe ee Ethiopia. - Ogaden24 | Ogaden24
TPLF oo Wadahadal ka Dalbatay Dowlada dhexe ee Ethiopia.
Feb 20, 2021 - Aragtiyood
TPLF ayaa codsatay wadahadal dhexmara iyaga iyo Dawladda Federalka Itoobiya.
Xoogaga la dagaallamaya Militariga Itoobiya ee TPLF ee ku sugan gobolka Tigreega ayaa soo saaray sideed shuruudood jimcihii si ay u bilaabmaan wadahadallo nabadeed oo dhex-mara iyaga iyo Dawladda Federaalka Itoobiya.
Shuruudaha waxa kamid ah magacaabista dhex-dhexaadiye caalami ah iyo helitaanka gargaarka bani’aadamnimada si shuruud la’aan ah.
Qodobada ay soo bandhigtay kooxda TPLF waxaa kamid ah dalabkii ahaa in Ereteriya ciidamadeeda kala baxdo Tigray. Eedeymaha joogitaanka militariga Eriteriya waa mid ka mid ah arrimaha aadka loogu muransan yahay.
Ereteriya iyo Itoobiya ayaa labaduba horay u beeniyay in ciidamada Eriteriya ay ka hawlgaleen dhulka Itoobiya. Balse dad goob joogayaal ah ayaa sheegay inay arkeen ciidamada Eritereya oo ku sugan Deegaanka Tigray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters.
Kooxda TPLF ayaa sidoo kale ku baaqday in meesha laga saaro maamulkii kumeel gaarka ah ee Deegaanka Tigray ee ay magacawday dawlada fadaraalka Itoobiya.
W-q: Barre Ali